Romson oo qodbad dareen wadata ka jeedisay kulanweynaha MP - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Romson oo qodbad dareen wadata ka jeedisay kulanweynaha MP
Romson: jihada u jeedno wey cadahay
La daabacay fredag 13 maj 2016 kl 11.44
Badanaa ma sahlaneyd ka hoggaamiye ahaan in aan arrimahan si kalsooni ku dhisantahay uga maqasuuso.
Åsa Romson horey u ahaan jirtay mid ka mid ah labada hoggaamiye ee xisbiga Miljöpartiet balse dhawaan xilkas laga tuuray ayaa maanta markii ugu horeysey qodbad ka horjeedisay wakiilada xisbiga oo kulanweynahooda sannadka la ah ku leh magaalada Karlstad.
Romson ayaa qodbaddeeda ku bilowdey in ay isku barbardhigta sida uu xisbiga Miljöpartiet loo arkey inta ay uusan biirin xukumadda oo uu mucaaradka ahaa iyo sida maanta loo arko.
- Shan sanno ka hor waxaan Miljöpartiet waxuu ahaa xisbiga loo arko casri oo dadka intoodada badan ka helaan. Halka maanta sawir laga heysto xisbiga uusan sidaas u wanaagsaneyn. Sawirka laga heysto siyaasiga iyo xisbiyada isbaddel ayaa ku yimid, sida loo qiimeyana waa adkaatey. Cimilada doodaha iyo aragti curintana waa isbeddeshay
- Waxaan doonaya in qirto in aysan badanaa aheyn mid sahlan ka hoggaamiye ahaan in aan arrimahan si kalsooni ku dhisantahay uga maqasuuso.
Laakiin ayaa qodbadeeda ugu baaqdey wakiilad xisbiga in aan dib la fiirin ee horey loo socdo.
- Hor u socda xisbiga bay’adda iyo dhaqdhaqaaqa dooga waxay tahay in la meel mariyo isbaddel siyaasadeed oo ku taagan bulshada bini’aadnimada ku weyntahay oo dhamaan carruurta oo dhan ka dhexmuuqdaan horumarna ka dhex sameyn karaan.
- Annaga marna kamo aanan labo labeyn jihadaas, jihadaasna ayuu isteerinka noogu xiran yahay si cad oo aan labo labo ku jirin, ayuu tir Åsa Romson
Kongereska Miljöpartiet oo ka bilowday magaalada Karlsta
Mehmet Kaplan oo is casilay
Wasiirka guriyeynta oo lagu heley in uu la afurey dad xagjir ah
Romson: waa aqbalayaa haddii lay beddelo
Åsa Romson oo jagadii wasiirnimada deegaanka dalkaan iska casishey